घर फुटबल EXTRAS फुटबल एलिटहरू Lorenzo Sanz चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
लोरेन्जो सान्जको हाम्रो जीवनी (लेट) तपाईंलाई उनको बाल्यकाल कहानी, सुरुको जीवन, परिवार, आमा बुबा, पत्नी, बच्चाहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा हामी तपाईंलाई लेट स्पेनिश व्यापारीको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू प्रदान गर्दछौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिनहरु बाट शुरू हुन्छ जब उनी प्रसिद्ध भयो तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न यहाँ ग्यालरी उठाउनको लागि एउटा सानो झुकाव छ - लोरेन्जो सान्जको बायोको उत्तम सारांश।
Lorenzo Sanz को जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उनी कोरोविरसको मृत्युको सबैभन्दा प्रख्यात स्पेनियाहरू मध्ये एक हुन् जसलाई कोविड -१ as पनि भनिन्छ। यद्यपि केहीले मात्र लोरेन्जो सान्जको जीवनीका सम्पूर्ण लेखहरू पढेका छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं
लोरेन्जो सान्जको बाल्यकाल कहानी:
लोरेन्जो सान्ज म्यान्सेबो, स्पेनको म्याड्रिड शहरमा अगस्त १9.1943 को 10th औं दिनमा जन्मेको थियो। उहाँ १० जना बच्चाहरूमध्ये जेठी हुनुहुन्थ्यो जो आफ्ना आमा-बुबामा जन्मेका हुन् जुन यस जीवनी लेख्ने समयमा धेरै चिनिदैनथे।
राजधानी र सबैभन्दा जनसंख्या भएको स्पेनमा जन्म भएकोमा धन्यवाद, सान्ज जन्मको सद्गुण र उहाँ आफ्ना नौ कान्छी भाइबहिनीको साथ सहरमा हुर्कनुभएको तथ्यले एक 'माड्रेलेनियन' हो।
लोरेन्जो सान्ज आफ्नो जन्म शहर माद्रिदमा हुर्किए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र WorldAtlas।
म्याड्रिडमा हुर्किएपछि लोरेन्जो सान्ज एक खेलकुद बच्चा थिए जुन फुटबल उनको हर समय मनपर्ने थियो। यो फुटबलले उनलाई आफ्नो बाल्यावस्थाको धेरै समयको लागि खुसी बनायो तर उनले तल्लो वर्गको परिवारलाई आर्थिक रुपमा बलियो राख्न मद्दत गरे पनि।
लोरेन्जो सान्जको परिवार पृष्ठभूमि:
सान्जको परिवारको थोरै आर्थिक कारणहरू उसको बुबा बुबा म्याड्रिड शहरको पार्क - एल रेटिरोका रखवाला थिए भन्ने तथ्यबाट धेरै टाढा थिएन। काम त्यस समयमा कम आय आर्जन गर्ने प्रयास मध्ये एक थियो।
आफ्ना भाइबहिनी मध्ये जेठा हुनाले सान्जले परिवारमा पर्याप्त पैसा कमाउनको निम्ति आफैलाई ग्रहण गर्यो। यसैले, उनी प्राय: कपालका कपालहरू खोज्ने गर्थे र उनको हजुरआमालाई रियल म्याड्रिडको स्टेडियममा प्रशंसकहरूलाई पानी बेच्न मद्दत गर्न समय निकाल्थे।
लोरेन्जो सान्जका अभिभावकको बारेमा धेरै लेखिएको छैन। छवि क्रेडिट्स: इन्स्टाग्राम र क्लिपआर्टस्टुडियो।
लोरेन्जो सान्जको क्यारियर बिल्डअप:
यो त्यस्तै एउटा बिक्रीको क्रममा सान्जले रियल-म्याड्रिडले आफ्नो दोस्रो यूरोपीयन कप (अहिले व्यापक रूपमा चम्पियन्स लिग ट्राफीका रूपमा परिचित) चमार्टनको सान्टियागो बर्नाबेउ स्टेडियममा उचालेको देखे।
लस ब्लान्कोसको लिफ्टको साक्षी युरोपको सर्वश्रेष्ठ ट्राफी स्टेडियमका सबैका लागि विशेष गरी सान्जको लागि एक रमाइलो क्षण हो जसले चाँडै नै गोलकीपरको रूपमा फुटबलमा प्रतिस्पर्धी क्यारियरको निर्माण सुरु गरे।
तत्कालिन जवान मात्र १ was वर्षका थिए जब उनले रियल म्याड्रिडले १ 142मा दोस्रो यूरोपीयन कप लिफ्ट गरेको देखे। छवि क्रेडिट: एल-पायिस।
Lorenzo Sanz फुटबल मा प्रारम्भिक वर्ष:
जब समय सहि थियो, गोलकीपरको रूपमा सान्जको फुटबल क्यारियर उत्साहपूर्वक शुरू भयो। उनले बिभिन्न माइन्रेलियन लिग टोलीका लागि खेले जुन पूआर्ता बोनिटा समावेश गर्दछ। दुर्भाग्यशाली वा सान्जको लागि भाग्यशाली, उनले प्रयाससँग अर्थपूर्ण प्रगति रेकर्ड गरेन।
त्यस्तै रूपमा, उसको व्यवसायको संसारमा डेलिभ गर्ने निर्णय गर्न सजिलो थियो। यद्यपि स the्क्रमण द्रुत थिएन। प्रिन्टि press प्रेस र फर्नीचरको बारेमा एउटा म्यागजिन प्राप्त गर्न पर्याप्त पैसा कमाउनु अघि उनी पहिलो प्रचारक थिए।
फुटबलरको रूपमा अर्थपूर्ण प्रगति गर्नमा असफल भएपछि उनी एक व्यापारी भए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
लोरेन्जो सान्जको जीवनी कहानी- फेमको लागि रोड:
एक चतुर व्यापारी भएको कारण, सान्ज एक वालपेपर कम्पनी चलाएर र रियल ईस्टेटमा डेलिभिंग गरेर आफ्नो तट विस्तार गर्न मा गए। उनी चाँडै नै यस्तो प्रभावशाली भए कि उनी फ्रान्कोइस्ट राजनीतिज्ञहरूसँग मित्र थिए।
१ 1980 s० को दशकमा एक महत्वाकांक्षी सनजले म्याड्रिडको रेसकोर्स चलाउँदै थिए। उसको बेग्लाबेग्लै व्यवसायिक प्रयासहरूको बीचमा सानज रियल मैड्रिडका मामिलाहरूमा धेरै सम्पर्कमा थिए। वास्तवमा, उहाँ बिस्तारै एक सामाजिक, बोर्ड सदस्य, उपाध्यक्ष र अन्तमा राष्ट्रपतिमा एक भावुक प्रशंसकबाट गए।
१ 1995 XNUMX the त्यो वर्ष थियो जुन उनी रियल मैड्रिडका राष्ट्रपति बने। छवि क्रेडिट: मार्का।
लोरेन्जो सान्जको जीवनी कहानी- प्रसिद्धि गर्नका लागि:
सान्जले १ 1995 32 z मा रियल मैड्रिडलाई अध्यक्षको रूपमा ग्रहण गर्दा क्लब शाब्दिक गडबड थियो र XNUMX२ बर्षदेखि च्याम्पियन्स लिग ट्राफी जित्न सकेन! वास्तवमा, लस ब्लान्कोस यूरोपियन टूर्नामेन्टका लागि क्वालिफाइ गर्ने नजिक कतै थिएन!
फुटबलका देवताले पठाएको उद्धारकर्ता जस्तै सान्ड रियल म्याड्रिडको भाग्य परिवर्तन गर्न सफल भयो। उनले धेरै प्रबन्धकहरूको परिवर्तनलाई हेरे र स्टार खेलाडीहरूलाई मन पराइए मनपराउँनुहोस् र आफ्नो पैसा संग Predrag Mijatović।
यो कदम फिर्ता भयो किनकि रियल म्याड्रिडले सन् १ years in in मा 1998२ बर्षमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग जित्यो। ऐतिहासिक जीतको जश्न मनाउन र सान्जको प्रशंसा गाउन करीव करीव आधा मिलियन फ्यानहरू म्याड्रिडका सडकहरूमा गए। सन् २००० मा सानजले फ्लोरेन्टिनो पेरेजको बिरुद्द एक संकीर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धामा गुमाउनु भन्दा अघि रियल मैड्रिडले फेरि ट्रफी जित्यो।
यो सान्जको प्रयास हो जसले Real२ बर्षेको खडेरी पछाडि रियाल म्याड्रिडले आफ्नो सातौं यूरोपीयन कप उचालेको थियो। छवि क्रेडिट: ट्विटर।
लोरेन्जो सान्जको पत्नी र बच्चाहरू:
व्यवसायमा एलिट फुटबल व्यवस्थापनमा सान्जको सफलताको बीचमा त्यहाँ एउटी आइमाई थिई जसले उनको छेउमा बाक्लो र पातलो भई। उनी अरू कुनै व्यक्ति होइन तर उनकी श्रीमती मारि लुज हुन्। सान्ज र मारी लुज कहिले डेटि began गर्न थाल्छन् वा गल्लीको मुनि गयो भन्ने बारेमा धेरै थाहा छैन।
तर हामी पक्का जान्दछौं कि लोरेन्जो सान्जकी पत्नी (मारी लुज) ले उनलाई children बच्चाहरू जन्माइन्। तिनीहरूमा पाको सान्ज (छोरा), फर्नांडो सान्ज (छोरा), डियानिया (छोरी) र मलाला (छोरी) समावेश छन्। सन् २०२० मा सान्जको मृत्यु नहोउन्जेल उनी आफ्नी श्रीमती र बच्चाहरूसँग धेरै नजिक थिए जसले उनको मृत्युलाई देख्ने कोरोनाभाइस (उर्फ कोविड -१)) को संकुचन गरे पछि उनको विचार र प्रार्थनामा श्रद्धापूर्वक उहाँलाई राखेका थिए।
उनकी पत्नी मारी र बच्चाहरू संग सानजको दुर्लभ फोटो - लोरेन्जो (एल) र फ्रान्सिस्को (आर)। छवि क्रेडिट: डेलीमेल।
लोरेन्जो सान्जको पारिवारिक जीवन:
लोरेन्जो सान्ज तल्लो वर्गको पारिवारिक पृष्ठभूमि सेटिंगबाट आएका थिए। हामी तपाईको परिवारका सदस्यहरुका बारे तथ्यहरु ल्याउँदछौं।
लोरेन्जो सान्जका बुबा र आमाको बारेमा:
सान्जका बुबा पार्क पार्क थिए जसले प्रयासबाट धेरै कमाउन सकेनन् जबकि उनको आमाको बारेमा थोरै वा कुनै कागजात उपलब्ध छैन। यद्यपि, उनले आफ्ना अभिभावकलाई उच्च सम्मानका साथ सम्हाले र फुटबलमा सफलता खोज्नको लागि उनीहरूको परिवारलाई सहयोग गर्न यथासक्दो गरे।
लोरेन्जो सान्जका अभिभावकको बारेमा धेरै लेखिएको समयमा थाहा छैन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र क्लिपआर्टस्टुडियो।
लोरेन्जो सान्जका भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
लोरेन्जो सान्जका आमाबुवाबाट टाढा, आफ्ना ib जना भाइबहिनीहरूको बारेमा धेरै थाहा छैन। न त त्यहाँ उनको परिवारको उत्पत्ति को अभिलेखहरु छन् विशेष गरी यो उसको मामा र बुवा हजुरआमा सँग सम्बन्धित छ।
सान्जको बुहारी (मलुलाको पति) एक पूर्व स्पेनी फुटबल स्टार - माचेल साल्गाडो हुन् जबकि उनका बुआ, काका, भतिजा र भतिजीहरू लेख्न अज्ञात छन्।
लोरेन्जो सान्ज उनको दुखद निधन हुनुभन्दा अघि - सम्भावित लक्षणहरूको मूर्ति मानिन्छ जसमा उनको अटुट जोश, नम्रता, कर्तव्यप्रति समर्पण, प्रशंसनीय नेतृत्व र आशावादी स्वभाव समावेश छन्।
नम्रता र अटुट जोश आफ्नो मनको व्यक्तित्वसँग अड्किएका केही मनमोहक गुणहरू थिए। छवि क्रेडिट: TheSun।
सान्जले ब्यापार र फुटबलको रुचिलाई पछ्याउन नसक्दा उनी आकर्षक गतिविधिहरू फेला पार्न सक्थे जुन उसको रूचि र रुचि हो भनेर चिनिन्छ। तिनीहरूमा घोडा दौड, कार्ड खेल्ने, क्युबाको सिगार धूम्रपान र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउने समावेश छ।
के तपाईं लोरेन्जो सान्जको कुल सम्पत्ति उसको मृत्यु हुनुभन्दा अघि million million मिलियनको सभ्य रकम भन्दा बढी थियो? सान्जको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा उसको जग्गा सम्पत्ति, क्लब स्वामित्व र निर्माण प्रयासहरूमा छ।
यसैले ऊ उच्च श्रेणीका नागरिकहरूको विलासी जीवनशैली बिताउन सक्षम भयो जसको म्याड्रिडभरि महँगो घरहरू छन्। त्यसबाहेक, ऊ राम्रो कारहरूमा सवार थियो र कहिल्यै दिवालियापन घोषणा गर्ने कारणहरू थिएन।
सान्जका लागि ताराको जीवन जिउने कुनै अन्त थिएन। छवि क्रेडिट: प्रोक्सिमस।
Lorenzo Sanz अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो लोरेन्जो सान्जको बाल्यकाल कहानी र जीवनी समेट्नको लागि, फुटबल एलिटको बारेमा यहाँ थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
सक्रिय खेलाडी र ब्यवस्थापकहरू जस्तो नभई, यो बताउन गाह्रो छ कि लोरेन्जो सान्ज धार्मिक व्यक्ति थिए कि थिएनन् किनकि उनी सामाजिक मिडियामा ठूलो थिएनन्। न त उनले नियमित आधारमा अन्तर्वार्ता दिए।
के तपाईंलाई थाहा छ सान्जको जन्म कुन वर्षको जर्मनीको प्रचार फिल्म टायटानिकले सिनेमा घरहरूमा हिट गर्‍यो? साथै, १ 1943 .XNUMX त्यो वर्ष थियो जुन फ्रान्सेली जाक कस्ट्यु र एमेल गग्ननले एक्वालung्गको आविष्कार गरेर पानीमुनि सास फेर्ने समस्याहरूको अवहेलना गरे।
एसाइड्स विश्वयुद्ध २, अन्डरवाटर सास फेर्ने सहयोग - एक्वालुung र टाइटेनिकको जर्मन चलचित्र खाताले १2.1943 मा सार्वजनिक भाषणको आकार प्रदान गर्‍यो।
तथ्य #3- क्लब स्वामित्व:
थोरै ज्ञात अधिग्रहण: धेरैलाई थाहा छैन कि सन्ज २०० Spanish - २०० between बीच स्प्यानिश क्लब मलागा सीएफका मालिक थिए। उनका छोरा फर्नान्डो २०१ 2006 मा कतारको लगानीकर्तालाई € करोड for० लाखमा बेच्नु अघि मालागाका अध्यक्ष थिए।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: ढिलो लोरेन्जो सानज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
लोरेन्जो सान्ज जीवनी (विकी ईन्क्वायरीज)
पुरा नाम: Lorenzo Sanz Mancebo।
जन्मे:9अगस्ट 1943
घटेको: २१ मार्च २०२० (उमेर 21 2020)
पत्नी: मारिया लुज दुरन मुओज।
बच्चाहरु: पाको सान्ज (छोरा), फर्नांडो सान्ज (छोरा), डियानिया (छोरी) र मलाला (छोरी)।
सापेक्षिक: Míchel साल्गाडो (ज्वाइँ)
सबै भन्दा राम्रोका लागि परिचित: रियल म्याड्रिड को राष्ट्रपति हुनु।